Madadaalada - Safarka Qoyska | Seymour, IN | Xarunta Booqdaha ee Degmada Jackson
Degmada Jackson waxay bixisaa tacabur weyn! Kaymaha quruxda badan, hoyga qaran ee duurjoogta iyo aag madadaalo oo dawladeed ah ayaa leh mayl dheer oo lug ah, baaskiil wadid buuro iyo wadooyin faras lagu raaco, iyo sidoo kale kalluumeysi, ugaarsi iyo fursado deegaan. Degmada Jackson waxay hoy u tahay laba koorso golf iyo dhacdooyin sanadle ah oo bannaanka ka dhaca.
Halkan guji si aad u soo degsato Khariidadda BIKE Jackson County "Bax oo Raac" Khariidadda
Halkan guji si aad u soo dejiso Tilmaamaha Dib-u-habeynta Dibadda ee Degmada Jackson
Madadaalada Bannaanka ee Degmada Jackson, IN
Degmada Jackson marwalba waxay leedahay nashaadaadyo badan oo madadaalo ah oo dibedda ah oo la heli karo. Xilli kasta ha ahaadee, waxaa jira wax qancinaya qof walba danihiisa.
Kaymaha iyo Dabiiciga ayaa ilaaliya
Iyada oo kumanaan hektar oo harooyin ah, keymo, iyo keyd ah aagga ah, Degmada Jackson waa meesha ugu habboon ee loogu talagalay qof kasta oo dabiicadda jecel. Soo bandhigida xayawaanka duurjoogta ah ee kala duwan laga soo bilaabo deerada caddeeya illaa iyo digaagga duurjoogta ah, kaalay soo indha indhee dhulalkaas la ilaaliyo oo u qaado geesinimo dhinaca duurka. Kaymahayaga iyo keydkeenuba way ku farxi doonaan haddii aad raadineyso socod dheer ama fursad aad ku ugaarsato oo aad kalluumeysato. Sidoo kale, hubi inaad fiiriso jidadka badan ee baaskiillada iyo meelaha kaamamka loogu talagalay joogitaanka dheer. Furka ka xira oo ku xirnaaw dabeecadda sidii loogu talagalay in loogu waaya-aragto!
Baaskiilku waa wax caan ku ah dadka deggan iyo booqdayaasha degmada Jackson si isku mid ah. Taasi waa sababta oo ah fursadaha ballaaran ee loogu talagalay hijrooyinka dhammaan heerarka khibradeed. Degmada Jackson waxaa ku yaal in ka badan 50 mayl jidad socod lug ah oo u dhexeeya Jackson-Washington State Forest, Muscatatuck National Wildlife Refuge iyo Starve Hollow Area Recreation Area.
Xagjiriinta oo ka kala socota dhamaan gobolka ayaa buuxiya biyaha degmada Jackson xilli kasta. Marka lagu daro fursadaha kalluumeysiga ee Hoosier National Forest, Jackson-Washington State Forest, Muscatatuck National Wildlife Refuge iyo Starve Hollow Recreation Area, Degmada Jackson waxay leedahay laba wabi oo kalluumeysatadu ku raaxaystaan.
The East Fork White River wuxuu si jaantus ah ugu socdaa Degmada Jackson wuxuuna siiyaa meelo badan oo marin-u-helitaan dadweyne ah dhammaan gobolka, oo laga heli karo guji xidhiidhkan. Wabiga Muscatatuck wuxuu xuduud la leeyahay magaalooyinka Vernon iyo Washington iyo sidoo kale Degmooyinka Jackson iyo Washington sidoo kale wuxuu leeyahay meelo badan oo marin-u-helka dadweynaha ah. Kuwa isticmaala wabiyada degmada Jackson County waxaa lagu boorrinayaa inay ka taxadaraan dhammaan nabadgelyada ayna akhriyaan xeerarka ka hor inta aysan bilaabin. Sii aqri guji xidhiidhkan.
Kayaking waa hiwaayad ku soo koraysa Gobolka Jackson iyada oo in badan oo ka mid ah ay u adeegsadaan Bariga Fork White River iyo Muscatatuck River sidii ay uga bixi lahaayeen oo u baari lahaayeen dabeecadda. Kayaks sidoo kale waa loo oggol yahay Kaymaha Jackson-Washington State, Aagga Madadaalada Gobolka ee Starve Hollow iyo Qaxootiga Duurjoogta Qaranka ee Muscatatuck. Starve Hollow xitaa waxay bixisaa kirooyin kayak ah oo loo isticmaali karo harada dhexdeeda inta lagu jiro safarkaaga.
Sawir adhi ah wiishashka sandhill inta lagu guda jiro socdaalkooda gu'ga sanadlaha ah iyada oo dhowr goobood oo ka tirsan Degmada Jackson ay ku nastaan ​​meelaha shimbiraha. Basaas gorgor bidaar leh oo duulaya, fiirso otters-ka webiga oo si roon isu dul taagaya dhagxaanta, ama u fiirsada deerada sida ay baadiyaha u daaqayaan.
Waxaad hubtaa inaad ka heli doonto meelo badan oo loogu talagalay madadaalo banaanka ah ee Degmada Jackson!
Hemlock Bluff Dabiiciga Ilaalinta
Keynta Qaranka ee Hoosier
Dabiiciga Knobstone Glade Nature
Naadiga Golf-ka ee Hickory Hills
Koorsadani waxay ku taal buuraha rogaalcelinta ee Gobolka Jackson, koorsada waxaa ku yaal sagaal god oo leh 3,125 yardage oo ragga ah iyo 2,345 oo haween ah oo leh par 35 labadaba Xarumaha waxaa ka mid ah baar fudud iyo dukaan pro. Hickory Hills Golf Club wuxuu ku yaal 1509 S. State Road 135 ee Brownstown.
Meel ku habboon oo ku dhow I-65, Shadowood wuxuu leeyahay 18 dalool oo leh qayb ka mid ah 72 iyo marinka 6,709. Xarumaha waxaa ka mid ah guri naadi ah, teendho, dukaan cunto fudud, dukaan pro, iyo baabur wadista. Shadowood wuxuu ku yaal 333 N. Sandy Creek Drive ee Seymour.
Kaamamka Degmada Jackson, IN
Haddii adiga iyo qoyskaaga aad raadineysaan boos safarkaaga xiga ee xerada, Jackson County waxay bixisaa goobo badan oo qurux badan oo ku habboon meel gaaban ama dheer. Macno malahan nooca kaamamka aad xiiseyn karto, boggagayagu waa kaa dabooli doonaan.
Meelaheena madadaalada iyo jardiinooyinkeenu waxay bixiyaan seddex nooc oo kaamam ah: qollo, goobo RV ah, iyo goobo horu dhac ah. Qolladaha ayaa ku habboon kuwa jecel inay seexdaan gudaha ama kuwa aan lahayn teendho ama RV. Goobahayaga RV waxay siiyaan martida meel ay ka helaan koronto. Kaamamka aasaasiga ah waxaa loogu talagalay kaamam dhaqameed, oo leh teendhooyin iyo cunto lagu karsado dab furan.
Fursadaha kaamamka dadwaynaha ayaa laga heli karaa Kaymaha Gobolka Jackson-Washington or Aagga Madadaalada Gobolka Hlow gaajo.
Ka dib markaad hesho meesha ugu fiican ee kaamamka, ku raaxeyso socodka lugo kala duwan oo wadooyin ah oo ka bilaabma mid fudud oo aad u adag. Fardo fuulista waxaa laga heli karaa meelo badan oo leh ogolaansho dowladeed, sidoo kale baaskiil wadista buuraha. Haddii kalluumeysiga ajandaha looga hadlayo, Degmada Jackson waxay leedahay meello kala duwan oo laga kala xusho oo xitaa waxay siisaa doonyo jaban, kayak iyo doonyaha kirada ah. Shatiga gobolka ayaa loo baahan yahay. Ha iloobin ugaarsadayaashaas qoyska ka tirsan. Ugaadhsiga ayaa loo oggol yahay meelo kala duwan oo leh rukhsad habboon. Dabaasha qoyska waxay jeclaan doonaan xeebta iyo biyaha aagga Madadaalada Gobolka Starve Hollow.
Qaxootiga Duurjoogta Qaranka Muscatatuck ee Seymour, IN
Muddo sanado ah, deganayaasha Jackson County iyo booqdayaashuba waxay ku naaloonayeen quruxda dabeecadda ee Muscatatuck National Wildlife Refuge. Iyada oo kumanaan hektar oo dhul qoyan ah iyo aagag kaymo leh, booqdayaashu waxay fursad u leeyihiin inay ku soo booqdaan bannaanka si dhammaystiran hab cusub. Magangelintu waxay ku taal meel ka baxsan US 50 oo masaafo yar u jirta Highway 65 waxaana si fudud looga heli karaa Indianapolis, Louisville ama Cincinnati.
Hawlaha Qaxootiga Duurjoogta
Markaad booqaneyso Qaxootiga Duurjoogta ee Muscatatuck, waxaa jira howlo loogu talagalay qoyska oo dhan. Mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee magangalyada, booqdayaal badan, ayaa ah fursad ay ku arkaan xayawaan ku jira deegaankooda dabiiciga ah. Magangalyadu waxay hoy u tahay in ka badan 300 oo nooc oo shimbiro guuritaan ah, oo ay ku jiraan labo haybadood, oo gorgorro bidaar leh. Dadku sidoo kale waxay ku raaxaystaan ​​daawashada gumeysiga maxalliga ah ee jiifka webiga markay ugaarsadaan oo ay ku ciyaaraan marinnada biyaha ee magangelyada. La socoshada xayawaanka, booqdayaashu waxay ku raaxaystaan ​​tamashleynta waddooyinka muuqaalka leh, iyo booqashada qolka Myers, dib loo soo celiyey, horaantii qarnigii 20aad iyo qol, oo ay leeyihiin Myers Family. Kalluumeysiga, ugaarsiga, iyo sawir duurjoogta sidoo kale waa waxqabadyo caan ah.
Magangalyadu waxay kaloo marti galisaa dhacdooyin sanadle ah oo ay ka mid yihiin Wings Over Muscatatuck, Log Cabin Day, Take a Kid Fishing Day, Day Wetlands, a Sandhill Crane event iyo kuwo kaloo badan.
Qaxootiga duurjoogta ah ee loo yaqaan 'Muscatatuck Wildlife Refuge' waxaa la aasaasay sanadkii 1966 si ay hoy ugu noqdaan soo hayaanka shimbiraha si ay u nastaan ​​una quudiyaan. Hadafkeedu waa in la ilaaliyo lana soo celiyo dhulka iyo marinnada biyaha, iyadoo loo oggolaanayo shimbiraha, xayawaannada, xamaarato, iyo kalluunka inay ugu yeeraan gurigooda.
Soo-booqdayaasha qaba su'aalaha ku saabsan dhacdooyinka soo socda, meelaha madadaalada qaarkood, ama howlo gaar ah waa inay la xiriiraan Muscatatuck National Wildlife Refuge oo ku yaal Facebook ama wac 812-522-4352.